Xoolihii laga soo Celiyay Dalka Sacuudiga oo Macluul ugu Dhimanaya Garaash ku yaala Magaalada Muqdisho (VIDEO) - Hablaha Media Network
Xoolihii laga soo Celiyay Dalka Sacuudiga oo Macluul ugu Dhimanaya Garaash ku yaala Magaalada Muqdisho (VIDEO)
HMN:- Arin aad looga naxay ayaa la soo sheegayaa in lagu arkay garaashyo waaweyn oo ku yaalla duleedka magaalada Muqdisho, kuwaas oo lagu xareeyay Lo’ fara badan oo laga soo celiyay dalka Sacuudiga.
Lo’dan oo qiyaas ahaan gaareysa kun neef ayaa waxaa lagu xareeyay oo lagu hilmaamay garaasyadaasi.
Koox isugu jiray weriyeyaal, siyaasiyiin iyo abwaano ayaa booqday xeradaas, waxa ayna sheegeen iney halkaas ku soo arkeen xaalad Murugo leh oo laga naxo.
“Intii aan joogney goobtii lagu xareeyay Lo’da waxay indhaheenu qabteen qaarkood oo Gaajo dartood isu cunaya, kuwo ay Naftu ka sii baxeyso iyo kuwo baqtiyay oo dhulka daadsan” ayuu yiri mid ka mid ah weriyeyaashii booqday garaashkaas.
Shirkad laga leeyahay dalka Masar oo lagu Magacaabo Naas-Galoob iyo Soomaali la shaqeysa ayaa la sheegay iney halkaas ku xareeyeen lo’dan la macluuliyey.
Abwaan Cismaan C/llaahi Guure oo goobta ka hadlay ayaa sheegay in arrintaan ujeedada laga leeyahay ay tahay in la xumeeyo magaca iyo sumcada Xoolaha Soomaaliya.
Yuusuf Maxamed Siyaad (Indhacadde) oo ka mid ahaa dadkii ku soo baxay dhibaatada loo geystay xoolahan ayaa sheegay in uusan waligii arkin xoolo maxaabiis ah, oo garaash lagu xirayo, isagoo madaxda dowlada ugu baaqay inay dabagal ku sameeyaan sababaha keenay dhacdadan foosha xun.